Vatengesi vekutengesa uye Fekitori | China Kutengesa Vanogadzira
AngelBiss inopawo chero imwe mhando dzakasiyana dzehutano hwehutano.
Kana iwe uri COPD, kana uine zvinotevera zviratidzo, sekufema kushomeka, kuridza ngonono uye kurara apnea syndrome. AngelBiss inogona kupa mudziyo wekufema kumba - Auto CPAP / BIPAP, inozovandudza basa rekufema kuchengetedza nzira yemumhepo, uye kuramba uchifema zvakajairika.
Kana iwe uine mukuru kana vane hutachiona hwakanyanya mumba, kuongororwa kweropa kwakanyanya. Zviri nyore kwazvo kutora tarisiro yehutano hwemhuri yako. AngelBiss ine mhando nhatu dzakasiyana dzezvigadzirwa zvaunosarudza: Yekumusoro Arm Ropa Kuomesa mhinduro mhinduro, Wrist Magetsi Ropa Pressure Monitor uye Finger Ropa Pressure Monitor.
Kana iwe ukabata kutonhora, kukosora, kana kurwadziwa pahuro, rhinitis, tonsillitis, kana asthma, iwe unozokurudzirwa kushandisa compression inhalation kurapa.
Ipapo iwe unozoda kumanikidzwa Nebulizer Mudziyo, AngelBiss inogutsa zvaunoda. Isu hatina chete kumanikidza nebulizer yevakuru, asiwo yemwana ane mhando dzakasiyana.
Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kuwana yekurapa yemagetsi thermometer muAngelBiss chigadzirwa katalog. Iyo ine yemhando yepamusoro mhando uye nemutengo unodakadza.
Kuti uwane zvimwe kubvunza kana ruzivo Nezve AngbelBiss, ndapota taura nesu pa info@angelbisscare.com.
AUTO CPAP / BIPAP inochinjika, uye iri nyore kushandisa uye kumisikidza uye kupaza.Iye zvakare inobvumidza kushandiswa kwepakati.Iyo inogona kuchengetedza kusefa, humidification uye kupisa basa remhino zvakanyanya kuitira kudzikamisa pneumonia inoenderana nemhepo. kugona kukosora, kutarisira uye kutaura, uye kugadzirisa nyaradzo Izvo zvinoshanda uye zvakachengeteka, uye zvakare zvinodzivirira kunetseka kwetracheotomy kana tracheal intubation.
Zvemagetsi eropa rekucherechedza, inowanzo gamuchira otomatiki emagetsi akangwara kweropa kuyera tekinoroji uye inoshandisa emagetsi kumanikidza uye pulsation sensors kuona kumanikidza uye pulsation masaini, uye kuataura iwo muchimiro chedigital kuratidza systolic yeropa, diastolic yeropa uye kupomba rate. zvakare ine LCD inoratidzira uye microcomputer otomatiki kutonga. Inogona kukurumidza uye kunyatso kuyera yako BP uye kupomba rate. Iwe unogona kunyange kugara uchiongorora yako BP uye kupomba kumba chero nguva.
Chiremba Akakomberedzwa Nebulizer
Vanachiremba nebulizers vanonyanya kushandiswa kurapa akasiyana ekumusoro uye ezasi ekuporesa zvirwere, senge dzihwa, fivha, chikosoro, asthma, kurwadziwa pahuro, pharyngitis, rhinitis, bronchitis, pneumoconiosis uye zvimwe zvirwere zvinoitika mune trachea, bronchi, alveoli, uye chipfuva mhango. . Nebulized inhalation therapy inzira yakakosha uye inoshanda yekurapa pakurapa kwezvirwere zvekufema. Nebulizer inoshandiswa kuomesa mushonga wemvura kuita zvidimbu zvidiki, uye mushonga unopinda munzira yekufema nemapapu nekufema mweya, kuti uwane kurapwa kusingarwadzi. Uye Maitiro acho anokurumidza uye anoshanda.
Zvimwe Zvekufema Zvishandiso Zvigadzirwa
Yakavezwa yekubata kamuri mhando yespacer iyo inosanganisira imwe-nzira vharuvhu pamuromo. Ichi chishandiso chinoita zvinopfuura kupa "nzvimbo" pakati pemuromo wako uye mushonga. Iyo zvakare inobata uye inobata mushonga wako, iyo inokupa iwe nguva yekutora inononoka, yakadzika kufema. Izvi zvinobvumidza iwe kufema mune ese emushonga. Imwe-nzira vharuvhu inomira iwe kubva netsaona kufemera mukati mehubhu. Dzakawanda dzakachengetedzwa dzimba dzekubatira dzakarongedzwa mukati neine anti-static kupfeka iyo inobatsira kuchengetedza mushonga kubva kunamatira kumativi ekamuri.
Kufamba kweropa Oximeter
Pulse Oximeter inogona kuongorora kuyerera kweropa okisijeni uye maparamende ekurovera. Uye pane pulse dhayagiramu dhayagiramu inoratidza.Uye iyo alson ine otomatiki yekudzima basa mushure memasekondi masere kana pasina chiratidzo.Muchina unogona kugara kwemaawa makumi maviri. Iyo zvakare ine yakaderera voltage alarm alarm.